Paige Zandri's Lahatsoratra momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Paige Zandri
Satria ny marketing sy ny asa fandraharahana rehetra - dia nanjary niantehitra bebe kokoa tamin'ny teknolojia, ny fiarovana ny fananana ara-tsaina dia nanjary laharam-pahamehana ho an'ireo orinasa mahomby. Izany no mahatonga ny ekipa marketing rehetra tsy maintsy mahatakatra ny fototry ny lalàna momba ny fananana ara-tsaina. Inona ny fananana ara-tsaina? Ny rafitra ara-dalàna amerikana dia manome zon'olombelona sy fiarovana sasany ho an'ny tompona trano. Ireo zon'olombelona sy fiarovana ireo dia manitatra mihoatra ny faritanintsika amin'ny alàlan'ny fifanarahana ara-barotra. Ny fananana ara-tsaina dia mety ho vokatry ny saina